Mozika klasika : Hampiaraka talenta i Doria sy Rahf | NewsMada
Mozika klasika : Hampiaraka talenta i Doria sy Rahf
Doria Rakotondrazaka, mpitendry piano Klasika. Rahf kosa, mpihira “Baryton”, fantatra kokoa teo amin’ny fitarihana antoko mpihira. Hampiaraka ny talentany izy ireo, ny zoma 22 desambra ho avy izao, manomboka amin’ny 7 ora sy sasany alina, etsy amin’ny FJKM Ambatonakanga.
Fizarana mozika klasika, mazava loatra, ka fampisehoana piano ny tapany voalohany. Hovelomin’i Doria Rakotondrazaka mandritra izany ny “Sonate K330” an’i W.A.Mozart, “Impromptus no3 op90” an’i F. Schubert, “ Intermezzo no2 op118 an’i J.Brhams, “Étude no12 op10 “Révolutionnaire” an’i F. Chopin, “ Consolation no3 an’i F.Listz ary ny “ Nocturne no3 “Liebestraum” an’i F. Listz ihany.
Raha tsiahivina, mpianatr’i Herimanitra Ranaivo nandritra ny 15 taona tao amin’ny CGM, taranja tendry piano, i Doria Rakotondrazaka. Tazana tamin’ireo fampisehoana mozika klasika lehibe, toa ny “Festival Classik’Art” sy ny “Concert de Midi” izy, ary nametraka ny anarany amin’ny fifehezany ny mozika tao anatin’ny roa taona izay. Efa mpampianatra piano rahateo ao amin’ny Anglican Music Institute ary mpampiofana eo anivon’ny Choeur Miangaly i Doria R.
Hamerina ireo sanganasan’ireo mpamorina italianina anisan’ny andrarezina tamin’ny mozika klasika kosa i Rahf. Anisan’ireny ny sanganasan-dry P.Tosti, ampahany amin’ireo hira tanatin’ny opera “Don Giovanni” sy ny “Les noces du Figaro” an’i Mozart. Hisy ihany koa ny famelomany ireo hira masina taty aoriana.